Xooggaga wax iska caabbinta reer Falastiin (Xamaas) waxay soo ban dhigeen; awooddooda, – ASM Raage
Xooggaga wax iska caabbinta reer Falastiin (Xamaas) waxay soo ban dhigeen; awooddooda,
Xooggaga wax iska caabbinta reer Falastiin (Xamaas) waxay soo ban dhigeen; awooddooda, aqoontooda, arinkooda waxaanay dhulka ogolaysiiyeen sankana ka toleen, dawladdii ugu madaxyada Nukliyeerka badnayd, kuna faanaysay hannaanka hawo xidhka casriga ah (Iron damy) iyo qalab tiro badan oo isugu jira kuwo military iyo qaar technologyeed kuwaasoo badiba dhawaan lagu soo daayey, suuqyada kala iibsiga hubabka qiimo sarana lagu baayacay.
DAGAALKANI MUXUU KAGA DUWANAA KUWII HORE?1) Dhimashada iyo dhaawaca, yahuudda oo tiro badnayd marka la barbar dhigo, muddada dagaalku socday. 2) Khasaaraha iyo burburka hantiyeed ee soo gaadhay ayaa isna aad u tiro badnaa, marka loo eego kuwii ka horreeyey. 3) Cir iyo Bad ba yuhuudda waxa la geliyey go’doon waxaana soo gaadhay khasaare dhaqaale oo aad u tiro badan.
4) Madaxdoodii iyo inta badan shacabkii reer Israa’iil waxay gabood iyo hooy ka dhigteen gododka iyo dhulka hoostiisa. 5) Wuxuu ahaa dagaalkii ugu badnaa ee la adeegsaday hoonka dhiillada ee ka diga halista iyo waxyeelada.6) Falastiiniyiintu waxay soo bandhigeen hub casriya oo gaadhaya masaafo 160km waxaanay u suurto gelisay in ay si sahal ah u duqeeyaan koonfurta Israa’iil. 7) Waxa fashilmay hubkii ay Yuhuuddu ku faanaysay ee ka hortagi jiray madaafiicda lagu garaaco, ka dib markay si sahal ah uga gudbeen hubkii guutooyinka Xamaas.
Yuhuudda waxa laga baajiyey in ay galaan, Qudus, sameeyaan barkac, burburiyaan hanti, ciidamadooda lugtuna waxay geli kari waayeen dhulka ay ka arimiyaan falastiiniyiintu.9) Yuhuudda iyo falastiiniyiintu waxay ka sinmeen, laydh iyo biyo la’aan, waxayse is dheeraayeen naxdinta iyo baqdinta taasoo ay ka sinnaayeen, madaxda iyo shacabka yuhuuddu.10) Caalamku wuxuu ogaaday, awoodda reer falastiin iyo itaalka yuhuudda, waxaana laga yaabaa in ay Iiraan weeraro ku qaado, maadama uh dhexyaalo khilaaf iyo xafiiltan muddo soo jiitamayey.
Madaxweynaha Puntland Saciid Deni oo gaaray magaalada Muqdisho